Haddii aad shaqo la'aan noqotid - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Haddii aad shaqo la'aan noqotid
Haddii Finland ku noqoyo shaqo la’aan, waxaad heli kartaa kaalmada shaqo la’aanta, haddii aad halkan si joogto ah u deggan tahay ammaanka bulshada Finland aad ku jirto. Waa in aad sidoo kale Xafiiska shaqada isaga diiwaangelisaa sidi qof shaqo raadis ah.
Isu diwaangeli shaqo laawe shaqo raadinaya
Waa inaad Xafiiska shaqada iyo xoogsashada islamarkiiba iska diinwaageliso, haddii aad shaqo la’aan noqoto. Iska diiwaangeli sidoo kale haddii shaqada wakhti cayiman lagaa fasaxo, waxbarashadaada ama shaqadaadi musharkeeda la taageerayo ay dhammaato. Kaalmada shaqo la’aanta waxaad heleysaa oo kaliya wakhtiga ay shaqo raadintaadu ka shaqaynayso.
Xaq ayaad u leedahay kaalmada shaqo la’aanta, haddii aad si joogto ah u deggan tahay Finland islamarkaasna aad ku jirto ammaanka bulshada Finland. Inkastoo aadan Finland si joogto ah Finland u deganayn ama aadan ku jirin ammaanka bulshada Finland, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay lacag-maalmeedka aasaasiga ama lacag-maalmeedka shaqo la’aanta ee mushaarka ku salaysan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka shaqo la’aanta ka aqri bogga InfoFinland Gargaarka shaqo la’aanta.
Diiwaangeli shaqo raadintaada adigoo isticmaalaya adeegga shabakadda ee adeegyada Xafiiska shaqada, tegaya Xafiiska shaqada ee kuugu dhow ama telefoon u diraya. Habka is-diiwaangelinta waxay ku xirantahay waddanka aad u dhalatay. Waxaad telefoonka isaga diiwaangelin kartaa, haddii aad horay macaamil uga ahayd Xafiiska shaqada. Markaas jinsiyaddaadu wax saamayn ah ma lahan.
Haddii aad tahay muwaadin waddan Midowga Yurub ama ETA ah
Waxaad iska diiwaangelin kartaa shabakadda adeegyada Xafiiska shaqada, haddii aad tahay muwaadin waddan Midowga Yurub ama ETA. Ku gal bogga shabakada sumadda lambar bankiyeedka Finnishka ama kaarka aqoonsiga ee magnedka leh. Adiga lagaagama baahna inaad wacdo ama aad tagto xafiska TE-ga, haddaan markaas si gaar ah laguugu yeerin.
Haddii aadan laheyn sumadda labarka bankiga iyo kaarka aqoonsiga magnadka leh, isaga diiwaangeli shaqo doone xafiiska shaqada iyo xoogsashada (TE-toimisto) ee kuugu dhow.
Haddii aad tahay muwaadin waddan kale oo aan Midowga Yurub ama ETA ahayn
Diiwaangeli shaqo raadintaada adigoo isticmaalaya foomka isdiiwaangelinta shabakadda ee adeegyada Xafiiska shaqada, haddii aad tahay muwaadin waddan kale oo aan ahayn Midowga Yurub ama ETA. Haddii aad horay macaamiil uga ahayd Xafiiska shaqada, telefoonka isaga diiwaangeli. Si aad shaqo raadiye ahaan isugu diiwaangeliso, waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha oo shaqeynaya.
Haddii aadan foomka ku buuxin karin shabakadda, tag si aad isaga diiwaangeliso Xafiiska shaqada ee kuugu dhow.
Marka aad tegeysid Xafiiska shaqada, horay u sii qaado:
dhammaan shahaadooyinka shaqada iyo waxbarashada
sharciga deganaanshaha oo shaqaynaya.
Ka codso kaalmada shaqo la’aanta kaasada shaqo la’aanta ama Kelada
Marka aad isu diiwaangeliso shaqo laawe shaqo raadis ah, Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ama adeegyada shaqaaloobidda degmadaada ayaa baaraya macluumaadka aad bixisay. Wuxuu ka gungaarayaa in shuruudaha lagu bixiyo lacagta badbaadada shaqo la'aanta aad buuxisay. Bixiyaha kaalmada yacni kaasada shaqo la’aanta ama Kelada waxay helayaan qaraar, kaas oo sheegaya in aad kaalmada shaqo la’aanta xaq u leedahay, Qaraarkan la’aantiis ma heli kartid kaalmada shaqo la’aanta.
Lacagta kaalmada ah ka codso qasnadda shaqo la’aanta ama Kelada, marka aad labo todobaad shaqo la’aan ahaato. Haddii aad ka tirsan tahay qasnadda shaqo la’aanta, ka codso qasnadda lacag-maalmeekda mushaarka ku salaysan. Haddii aad qasnadda shaqo la’aanta ka tirsanayn, Kelada ka codso lacag-maalmeedka aasaasiga ah ama taageerada suuqa shaqada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan manfacyda shaqo la’aanta ee kala duwan ka aqri bogga InfoFinland Gargaarka shaqo la’aanta.
Talooyinka la xiriira arrimaha ammaanka shaqo la’aanta waxaad ka heleysaa Xafiiska shaqada ama talabixinta ammaanka shaqo la’aanta ee adeegyada Xafiiska shaqada:
af Finnish: 0295 020 701
af iswiidhish: 0295 025 510
af Ingiriis: 0295 030 713
af Ruush: 0295 020 715
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga: Gargaarka shaqo la’aanta.
Hadii aan shaqo la'aan noqotidFinnish | Iswidish | Ingiriis
Isku diiwaangelinta shaqo la'aan shaqo raadinayaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Hagida badbaada shaqo la'aantaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Dalxiisidda, waxbarashada ama shaqada wakhtiga lagu jiro shaqo la’aanta
Haddii aad bilowdo shaqo ama waxbarasho adigoo shaqo la’aan ahaa, ogeysii Xafiiska shaqada iyo xoogsashada ama adeegyada shaqaaloobidda ee degmadaada. Halkaas ayaa lagaaga sheegayaa siday waxyaabahaasi u saamayn karaan lacagtaada shaqo la’aanta.
Haddii aad ku safrayso gudaha dalka ama dibadda ka taxadir in lagu heli karo. Tusaale ahaan nambar telefoon ama cinwaan uga tag xafiiska shaqada ama adeegyada shaqaaloobidda degmadaada una sheeg waqtiga aad fasaxa ku maqnaaneyso.
Safar dibadda aad u aadeyso dartiis uma diidi kartid shaqo laguu fidiyay.
Haddii aad billowdo hawl ganacsi adigoo shaqo la’aan ah, waxaad 4ta bilood ee ugu horeysa heli kartaa manfaca shaqo la’aanta.
Waqti cayiman ayaad weyn kartaa xuquuqda helitaanka lacagta shaqo la'aanta, haddii shaqo la'aantaada ay sabab u tahay sabab aad adigu keentay. Karensi ayaad geli kartaa tusaale ahaan haddii:
aadan dalban shaqo uu Xaafiiska shaqada ama iyo xoogsashada adeegyada shaqaaloobidda degmadaadu uu adiga kuu diray inaad dalbato
aadan qaadan shaqo lagu siiyey
aad shaqadaada uga tagtid sababo aan cuslayn
Waqtiga karensigu wuxuu u dhexeeyaa 15 maalmood iyo 90 maalmood. Dhirirka karensigu wuxuu ku xiran yahay hadba sababta karesiga keentay. Xaaladaha qaarkood waxaad ku weyn kartaa xuquuqda helitaanka lacagta badbaadada shaqo la'aanta ilaa waqti aan la cayimin.
TE-toimisto: Tietoa työnhakijalle 2 somali